Factory Fefy Solar - Mpanamboatra Fefy Solar Solar Fences, Mpamatsy
3D fefy tariby miolakolaka mifamatotra, fefy manjavozavo malaza ho toy ny fefy fiarovana ny trano fonenana any Amerika Avaratra
3D fefy tariby miolakolaka 3D dia manondro ny fefy tariby 3D lasera, tontonana fefy 3D, fefy fiarovana. Izy io dia mitovy amin'ny fefy M-endrika miendrika fefy tariby hafa fa tsy mitovy amin'ny elanelam-baravarana sy ny fitsaboana amin'ny tany noho ny fampiharana hafa. Ity fefy ity dia matetika ampiasaina amin'ny tranobe hipetrahana mba hisorohana ny olona hiditra ao an-tranonao tsy misy fanasana.
M-fefy Galvanized Welded Mesh Fence (Paingotra iray) ho an'ny fambolena masoandro
Ny fefy mesh tariby miendrika M dia natao ho an'ny zavamaniry masoandro / fambolena masoandro. Ka antsoina koa hoe "fefy zavamaniry masoandro". Mitovy amin'ny fefy zavamaniry masoandro iray hafa izy io fa mampiasa paositra an-taratasy fa tsy hitsitsy vola ary hanamora ny dingana amin'ny fanamboarana.